OGWU | RayHaber
[10 / 12 / 2019] IZBAN Tepekoy Izmir Bus Stations na Map	35 Izmir
Taa na akụkọ ihe mere eme: 11 Disemba 1921 Kazim Karabekir
Taa na History 11 Disemba 1921 Kazım Karabekir rịọrọ Rauf Bey, onye na-esote Nafia, ka ọ mee Samsun ka ọ bụrụ ọdụ ụgbọ mmiri mara mma, iji mee ka okporo ụzọ Ankara-Sivas-Erzurum ma jikọọ Samsun n'okporo ụzọ a; Bzọ ụgbọ oloko Trabzon -Erzurum [More ...]
IZBAN Tepekoy Izmir Bus Stations na Map
PeZBAN Tepeköy İzmir Njem Nleta: İZBAN bụ otu n'ime usoro ụgbọ njem ọha na eze nke obodo mepere emepe na Turkey nke nwere ọdụ ụgbọ elu na-eje ozi n'okirikiri obodo dị n'etiti Aliağa Selçuk. Ọtụtụ iri puku kwa ụbọchị [More ...]
Metro Istanbul ga-agbakwunye ndị ọkwọ ụgbọ oloko ọhụrụ na ndị otu ya iji mee ka ndị ọrụ ya dị ike. Istanbul Metropolitan Municipality enyemaka ụlọ ọrụ, Turkey obodo kasị ukwuu Istanbul Metro okporo ígwè ọrụ, na-ịgbasa ya mkpara. 154,25 km [More ...]
Mahadum Ege ga - akpọta ndị ọrụ ikpe amamịghe na mbụ; Mahadum Ege ewepụtala ọkwa ọhụrụ nke ndị ọrụ site na DPB. Dabere na ọkwa ọkwa Ege University site na İŞKUR 10-16 December 2019 [More ...]
Ndi Giram Uwa n’uwa nile abiawo na Eskişehir; Ihe ngosi Rail Industry Show, nke Modem Fuarcılık haziri ya na nkwado nke Minista njem na ihe oru, ihe nlere nke ugboala na ihe ngosi nke teknụzụ. [More ...]
Ntị 3 na Çorlu train train; Mpaghara Çorlu nke Tekirdağ, ndị 25 nwụrụ, ndị 328 merụrụ ahụ n'ihe mberede ụgbọ oloko 3'inci malitere. Istanbul si mpaghara Uzunköprü nke Edirne Halkalı'ma ọ bụ [More ...]
A na-ebugharị ndị agha Zamun Army High Speed ​​Railway Line maka ndị ọrụ ụgbọ mmiri; Lineun Train Speed ​​Speed ​​Samsun-Ordu, nke enyere oru ngo a karia izu gara aga, masiri Ordulular ya. Onye isi ala OTSO Servet Sahin, obi uto nke ahịrị a na-achọ kemgbe ọtụtụ afọ [More ...]
A na-ekpughere inzọ Ọgba Ọgba Ọhụrụ dị elu (YHT) nke nnukwu German nke Siemens maka TCDD gosipụtara. YHT, nke nwere ike ịga na kilomita 300 kwa elekere, na-ezube inye ndị njem ahụ ahụike na ahụrụ ha ọfụụ. [More ...]
Onye na-ahụ maka ụgbọ njem-Sen Yerköy gara na ndị ọrụ TCDD; Onye Ọdụ -gbọ njem-Onye isi oche Kenan Çalışkan na ndị isi oche Atilla Demirtunç na Mehmet Yıldırım, Onye Ọdụ Transportgbọ njem-Sen Ankara 1 Alaka Onye isi oche Erkan [More ...]
otu n'ime Turkey elu-ọsọ ụgbọ okporo ígwè ike nke na-eru a ọsọ kacha silently site na ntinye ka isi obodo Ankara urua. Gbọ ahụ gafere Arifye na nke mbụ. Nkpughepu nke ndi isi n’otu okwu banyere okwu a [More ...]
The Bosphorus Express Amalitere Passgbọ njem Ndị njem mbụ site na Osmaneli; Onye isi obodo Osmaneli Munur Sahin kwuru: ya Nye onye isi ụgbọ njem na akụrụngwa Mehmet Cahit Turhan na onye nnọchite anyị Selim Yağcı bụ ndị mere ka ụgbọ oloko Bosphorus kwụsị na mpaghara anyị [More ...]
Turkey mbụ okporo ígwè ụgbọala ekspootu BozankayaGa-arụpụta ala ala ụlọ nrịanụ nke 30% 16 ruru euro 90 nke obodo Iaşi. Vehiclesgbọ ala azụmahịa eletrik na ụgbọ okporo ígwè dị na Ankara [More ...]
Ahịrị Na-enweghị Ahịrị na Ọdụ ụgbọ oloko na China; Dị ka akụkọ China International Radio si kwuo, otu ụgbọala n'okporo ụzọ Yibin City dị na Sichuan Province na-eso ụkwụ ya na ụkwụ taya. [More ...]
Projectzọ ụdọ a ga-arụ ọrụ na mpaghara Sapanca na-abịa n'usoro a na mmeghachi omume maka ọrụ. Keduzi ihe bụ sapanca ropeway project na-ebute mmeghachi omume? Site na Kırkpınar na mpaghara Sapanca, ahịrị kilomita nke 1,5 ga-agbatị ruo mahmudiye. [More ...]
1 2 ... 4.439 »